काठमाडौं उपत्यकामा लागू भयो यस्तो नियम ,अटेर गरे कारबाही यस्ता छन् पालना गर्नुपर्ने नियम! – List Khabar
Home / समाचार / काठमाडौं उपत्यकामा लागू भयो यस्तो नियम ,अटेर गरे कारबाही यस्ता छन् पालना गर्नुपर्ने नियम!
काठमाडौं उपत्यकामा लागू भयो यस्तो नियम ,अटेर गरे कारबाही यस्ता छन् पालना गर्नुपर्ने नियम!
admin January 13, 2022 समाचार Leaveacomment 135 Views
काठमाडौं उपत्यकामा लागू भयो यस्तो नियम ,अटेर गरे कारबाही यस्ता छन् पालना गर्नुपर्ने नियम! काठमाडौं । अबदेखि काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक स्थानमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको मंगलबार बसेको बैठकले बढ्दै गइरहेको को,रोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो ।
आजको बैठकले सार्वजनिकस्थलमा २५ जना बढी मानिस भेला हुन रोक लगाउने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ । निर्णयको सूचना केहीबेरमा सार्वजनिक हुँदैछ ।
यसअघि सोमबार गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक स्थलमा २५ जना बढी भेला हुन नपाइने भन्दै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र पठाएको थियो।
अन्य समाचार | काठमाडौं, पुस । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयले हवाई यात्रु आवागमनको चाप र विमानस्थलमा स्थान सीमितताको कारण अति जरुरी बाहेक स्वागत तथा बिदाइ गर्न नआउन आग्रह गरेको छ ।
कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जरुरी काम बाहेक यात्रुको स्वागत तथा बिदाइका लागि मात्र विमानस्थल नआइदिन आग्रह गरेको हो । विमानस्थलमा अनावश्यक भिडभाड नगरिदिन साथै हवाई यात्रा गर्दा अपनाउनुपर्ने
स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्डको परिपालना गरी गराई मात्र दैनिक हवाई सेवा सुचारु गर्नु गराउनु हुन सम्बद्ध सबै सरोकारवालासँंग विशेष अनुरोध विज्ञप्तिमा गरिएको छ । साथै, को,भिड –१९ को जोखिमलाई दृष्टिगत गरी विमानस्थल कार्यालयबाट अति नै जरुरी अवस्थामा बाहेक पास उपलब्ध नगराइने जनाएको छ ।
Previous यामाहा एमटी १५ को २०२२ भर्सन सार्वजनिक हुँदै, यस्ता छन् नयाँ फिचर, मुल्य कति… ?
Next तिन दिन सार्बजनिक बिदा !